Farmaajo shalay gunnimo dhereg leh ayuu diiday lakiin maanta gunnimo Gaajo leh ayuu qaatay!
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo
Qalbi dhagax yaa amray in la dhiibo?
Maxaa loo dhiibay?
Dowladdu maxaa tallaabo ah oo arrinkaas kaga jawaabaysaa?
Inay u yeeraan laamaha ay quseyso arrinkaan?
In lala xisaabtamo cidii amarkaan bixisay
In khiyaamo qaran lagu soo oogo cid walba oo ku lug yeelata arrin kaan, shaqada qarankana laga cayriyo.
Inay baaritaan madax banana ku sameeyaan hadii uu jiro heshiis ka dhexeeya labada dowladood oo an barlamanka la horkeenin.
Meel walba oo ay joogaan in ay ka banana baxaan falkaan gurracan ee lagula kacay qaranimada.
Inay u midoobaan cadowga soomaaliyeed ee dhiig miiratada ah oo gadanaya dhiiga dadka soomaaliyeed.
Inay qabyaalada iyo kala qoqobka ka baxaan oo dalka sidii loo dhisi lahaa usoo jeestaan inta maqanna loo xoreyn lahaa.
Dhallinyaradu waa kuwii lagu baxsan jiray maanta oo kale ee ha isku tashadaan dalkana ha u taliyaan.
Inay ka hadlaan waxa diintu ka qabto in qof muslim ah gaalo loo gacan galiyo shuruud la’aan.
Inay dadka soomaaliyeed ka wacyi galiyaan is jaasuusida iyo musuqmaasuqa.
Previous: Aroos Indhaha Bulshada soo jiitay..Video
Next: Xisbiga Waddani Oo Ka Hadlay Sababta Ay U Hakiyeen Sagaal Guddi Hawleed Oo Uu Soo Saaray Xisbigaasi